धुर्मुससँग ओली संवाद : 'सक्कली ओली भन्छन्- 'धुर्मुसेले बेलाबेला मेरो हुर्मत लिन्छ'
नेपाल लाइभ शुक्रबार, साउन ३१, २०७६, ११:०५
हास्यकलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले लामो समयदेखि पर्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्यारिकेचर गरी दर्शक हसाउँदै आइरहेका छन्। ओलीको भूमिका निर्वाह गर्दाको उनको अनुभव कस्तो होला? उनको नजरमा ओली कस्ता नेता हुन्? गाईजात्राको अवसरमा अनिल यादवले उनीसँग गरेको संवाद:
तपाईंको नजरमा केपी ओली कस्ता नेता हुन्?
म उहाँलाई एकदमै रमाइला, जोसिला र केही गरौं भन्ने आत्मबल भएका नेता मान्छु।
उनको भाषण शैली तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
साह्रै रमाइलो। बीचबीचमा फाट्टफुट्ट निस्कने उखान शैली खुब मन पर्छ। म उहाँले बोल्ने उखान टुक्काको त गज्जब फ्यान हुँ। ती उखान टुक्का हामी कमेडियनहरुलाई बेलाबेलामा मसला र खुराक बन्छ।
पर्दामा केपी ओली बन्न कति सहज भयो तपाईंलाई?
त्यति गाह्रो भएन। २०६६ सालमा म र केदार घिमिरे भएर ‘सम्धिज्यू’ टेलिफिल्ममा बनाएका थियौं। त्यतिबेला मैले एउटा वडाध्यक्षको क्यारेक्टर निर्वाह गरेको थिएँ। त्यो क्यारेक्टरको हाउभाउ, बोलीचाली ठ्याक्कै केपी ओलीसँग मिलाएको थिएँ। बोलीचाली र हाउभाउ पहिल्यै गरेको भएर पछि नक्कली केपी बन्न गाह्रो भएन। गेटअप गरिसकेपछि बोलीचाली र हाउभाउमा सहज भयो। बरु संवादमा पन्च दिनचाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। किनकि उहाँको संवादमा पन्च दिने शैली बडो गज्जब थियो।
नक्कली केपी बन्दा सक्कली केपीको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ?
‘धुर्मुसेले बेलाबेलामा मेरो हुर्मत लिन्छ’ भन्छन् (हाँस्दै)।
पहिलोपल्ट उहाँसँग कहिले कसरी भेट भयो?
२०६६ सालमै गाईजात्राको दिन हामीले ‘ग्रहशान्ति’ शीर्षकमा प्रहसन गरेका थियौँ। त्यतिबेला मैले उहाँकै क्यारेक्टर निर्वाह गरेको थिएँ। उहाँ त्यतिबेला प्रहसन हेर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान आउनुभएको थियो। एकदमै मन पराउनुभएछ। त्यो दिन प्रत्यक्ष कुराकानी हुन पाएन तर त्यसको भोलिपल्टै उहाँको स्वकीय सचिवको फोन आयो। ‘एकपल्ट भेट्न बोलाउनभएको छ, घरमा आउनु रे’ भन्ने कुरा आयो।
म र सुन्तली गयौं। उहाँ त नडराई बोल्ने मान्छे, थर्काउनलाई पो बोलाएको हो कि भनेर मनमा डर थियो। बालकोटस्थित उहाँको घर पुग्दा ठूलो भिड थियो। आधा घन्टा कुरिसकेपछि माथिबाट आवाज सुनियो, ‘मितज्यू आउनुभा’छ भन्ने सुनियो, कता हुनुहुन्छ, खोइ?’ त्यसपछि हल्का डर कम भयो।
रमाइलै हुनुहुँदो रै'छ। एकदमै राम्रो संवाद भयो। अभिनयको तारिफ गर्नुभयो। भन्नुभयो, ‘तपाईंको कार्यक्रम हेरेँ, खुसी लाग्यो। अहिलेसम्म मेरो क्यारिकेचर कसैले गरेको देख्या थिइनँ, तपाईं एउटा निस्किनुभएछ।’ जे होस्, सुन्तली नानीको हिरोले क्यारिकेचर गर्‍यो भन्दै ठट्टा गर्नुभएको थियो। त्यतिमात्रै होइन, उहाँले त ‘म पनि फेरि कलाकार हो, ख्याल गर्नु है’ पनि भन्नुभयो । मैले ‘हो र’ आश्चर्य प्रकट गरेपछि आफ्नो संगीत कोठातिर लानुभयो र ठट्यौली शैलीमा भन्नुभयो, ‘हो नि, म त बबालै कलाकार हो नि।’ संगीत कोठामा बाजागाजा रै'छ। बाजागाजा देखाउँदै ‘मादल पनि बजाउँछु’ भन्नुभयो।
मैले ‘मादल पनि?’ भनेर आश्चर्यभाव प्रकट गरे। सोधेँ। त्यसपछि एकछिन मौन हेर्दैै जवाफ फर्काउनुभयो, ‘बबालै बजाउँछु नि।’ जे होस्, खुब कमेडी शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो। रमाइलो लाग्यो। खुसी लाग्यो। त्यसपछि उहाँको क्यारिकेचरलाई निरन्तरता दिन मलाई झन् सहज भयो।
उहाँसँग अहिले तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ?
सम्बन्ध ठिकै छ, राम्रै छ।
उहाँका असल पक्ष के लाग्छन्?
जे पनि गर्न सक्छु भन्ने जोस र आफू अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि निरोगी महसुस गरेर अगाडि बढ्ने संकल्प उहाँको सबैभन्दा असल पक्ष लाग्छ।
अनि, खराब पक्ष नि?
ख्यालै नगरी जे पनि गर्छु भनेर बोल्ने। महत्वाकांक्षी सपनाहरु बाँड्ने तर योजनाहरु कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर ख्याल नगर्ने।
मान्छेहरुले सक्कली केपीको आलोचना गर्दा, कुरा काट्दा तपाईं नक्कली केपीलाई कस्तो महसुस हुन्छ?
कस्तो पनि लाग्दैन। आफू पनि कहिलेकाहीँ भुंग्रोमा परिरहिन्छ।अरुको कुरा काट्ने र आलोचना गर्ने त हाम्रो पौराणिक संस्कार बनिसक्यो। यसलाई गाईजात्राको रुपमा लिनुपर्छ।
पारिवारिक सम्बन्ध छ भन्ने सुनिन्छ नि?
धेरै समय भयो भेट भएको छैन। सामाजिक काममा निरन्तर अघि बढेका छौं। काम नपरी भेट्ने कुरा पनि भएन। ठिकै छ।
उहाँबारे तपाईंलाई थाहा भएको कुनै गोप्य कुरा?
अरुचाहिँ सबै थाहा छ तर गोप्यचाहिँ केही थाहा छैन हौ (हाँस्दै)।
पछिल्लो समय कमेडियनले नेताको काम गरे, नेताले कमेडियनको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुब ट्रोल र टिप्पणीहरु बन्ने गरेका छन्। यसमा तपाईंको धारणा?
जसले गरे पनि राष्ट्रकै लागि काम गर्ने हो। म चाहिँ जिम्मेवार नागरिकको काम गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेको एउटा अभियन्ता हो, सेवक हो। खासमा नेताले जनतामुखी भएर काम गर्दिएदेखि हामीजस्ता अभियन्ताले काम गर्नै पर्दैन नि! नगरेकै भएर त हामी अघि बढ्नपर्‍या हो। नत्र त हामी जुन पेसा गरिरहेका छौं, त्यही पेसामा मात्र बफादार भएर लाग्दा पुगिहाल्थ्यो।